News Collection: फेरि सँगै देखिए रविना र राजवल्लभ !
फेरि सँगै देखिए रविना र राजवल्लभ !
'सम्बन्ध'का कारण चर्चामा आएका हिरो राजवल्लभ कोइराला र बैकस्र रविना जोशी फेरि एकसाथ देखिएका छन् । शनिबार राती सम्पन्न फेसन परेड नामक फेसन सोमा रविना र राजवल्लभसँगै बसेका थिए । छेउमा थिए महेश शाक्य । पछिल्लो समय दुईजनाबीचको रोमान्सको समाचार बुधबार बाहिर आएपछि राज र रविना दुवै चर्चामा छन् ।
रविनासँग आफ्नो गहिरो मित्रता रहेको बताउँदै आएका राजवल्लभ पुनः रविनासँगै देखिनुलाई धेरैले उनीहरुबीचको गाढा सम्बन्धबारे अड्कल काटेका छन् । बैंकिङ ब्यावसायकी जागिरे रविना र चलचित्र अभिनेता राजवल्लभबीच डेढवर्षदेखि चिनजान रहेको कुरा स्वयम राजले स्वीकार गरिसकेका छन् । आइतबार बेलुका रुझेको साँझमा बसन्तपुरमा भेटिएका राजवल्लभले रविनासँगको आफ्नो सम्बन्धबारे धेरै कुरा मेरोसिनेमासँग गरे ।
गत विहिबार राजवल्लभले रविनासँग विवाह हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । यद्यपी समाचार बाहिर आएलगत्तै पुनः एकैठाउँमा दुवैजनालाई सँगै बसेको देखिनुले उनीहरु आफ्नो सम्बन्धबारे झनै उदार र स्वतन्त्र भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उक्त फेसन परेड सोमा निशा अधिकारीले पनि मोडलिङ गरेकी थिइन् ।